Mustaqbalka Dhismaha Waara - Xarunta EcoTechnology
Taariikh ahaan, dhismooyinka dhaadheer badankood waxaa laga dhisay shubka, birta, iyo quraaradaha.
Qalabkani waa xoog badan yahay, si ballaadhan loo heli karaa, fududna in lala shaqeeyo; gaar ahaan shubka oo qaab u yeelan doona qaab kasta oo aad ku shubto. Dhismayaashu sidoo kale way sii kordhayeen tan iyo bilowgii 1900-meeyadii iyada oo ay ugu wacan tahay habab cusub oo kor u qaaday awoodda steel oo la taaban karo, laakiin xooggan iyo sahlaansigan lagu daray wuxuu la yimid kharash.
Baaskiil iyo steel waxsoosaarka ayaa mas'uul ka ah isku darka 16% ee wasakhda gaaska adduunka. Qiiqaas badankood waa la sii daayaa inta lagu jiro ka shaqeynta maaddada; inta lagu jiro taas oo alaabta ceeriin ah ay tahay in la kululeeyo kumanaan darajo Fahrenheit ah si loo soo saaro steel iyo Portland sibidhka (waa shey muhiim ah oo la taaban karo).
Hadafyada cimilada qaran ee gardarrada ah ee dusha sare ka jira, waxaa jira fursado badan oo isbeddel togan lagu sameeyo warshadaha dhismaha. Feejignaan badan ayaa lasiiyay waxtarka tamarta (oo saxna waa sidaas), laakiin waxaan sidoo kale ubaahanahay inaan diirada saarno qiiqa laga sii daayo soosaarka iyo gaadiidka qalabka dhismaha laftooda. Qeybtaan sii deynta qiiqa, oo loo yaqaan kaarboon macaan, ayaa xisaabeysa 28% wadarta qiiqa dhismaha.
Xal Milyan-sano-jir ah
Nasiib wanaag, waxaa jira waxyaabo halkaa ka jira oo naga caawin kara arrintan. Maaddadu waa qiimo jaban, fududahay in la qaado, umana baahna foornooyinka qarxa ee leh kumanaan kun digrii in la soo saaro. Xaqiiqdii, xitaa way nuugtaa kaarboon waxayna keydisaa inta lagu gudajiro hawsha "wax soo saar". Malaha waligaa horay ayaad ula kulantay. Waxay ku jirtaa gurigaaga, waxay ku taal dariiqaaga, waxaana loo isticmaali jiray in wax lagu dhiso kumanaan sano.
Qalabkan kaarboon-yar ayaa ah qoryo.
Farsamooyinka alwaaxda ee cusbooneysiinta ayaa awood u leh inay u rogaan qoryaha sida kuwan oo kale qaab dhismeed ahaan ugu dhawaaqaya sida birta oo kale
Alwaaxdii hore waxay ahaan jirtay waxyaabaha la doorto ee magaalooyin badan oo adduunka ah, laakiin walaaca laga qabo ololka iyo soo ifbaxa agabyo cusub ayaa sababay in dhismayaashii iyo naqshadeeyayaashu joojiyaan.
Qoryo ayaa soo noqosho leh inkastoo. Geedaha koraya aad ayey uga yaryihiin xagga tamarta soosaarka birta iyo shubka, qoryahana xitaa waxay yeelan karaan raad aan fiicnayn oo kaarboon ah marka aad tixgeliso xaddiga kaarboon ay nuugayso iyo dukaamada.
Sida ku cad Wareegga Ecology's Macluumaadka Kaarboonka Raad-raacsan, soo saarista kiilo garaam oo alwaax ah waxay soo saartaa saddex meelood meel qiiqa u dhigma bir ama dhalo u dhiganta, iyo kala bar qiiqa qaddarka u dhigma ee u dhigma. Waxyaabo badan oo alwaax ah ayaa sidoo kale runtii ku dambeeya inay noqdaan kuwo kaarboon xun, maaddaama ay sii nuugaan C0 badan2 marka ay koraan inta la sii daayo inta lagu jiro howsha iyo gaadiidka.
Laakiin Waxaa Jira Waxoogaa Tabasho Ah…
Si fiican ayaa loo oggol yahay in alwaaxda ay ka yartahay kaarboonka la taaban karo marka loo eego shubka iyo birta, laakiin ka hor inta aan looxa loox saarin waxyaabaha dhismaha ee mustaqbalka waa inaan wax ka qabannaa qaar ka mid ah walaacyada sababay in alwaaxdu ka soo dhacaan dhismaha guud marka hore.
Walaaca ugu weyn ee ku saabsan qoryaha ayaa ah olol. Alwaaxda waa mid aad u ololi kara, kahor intaan shubka iyo birta ay noqonin heer, magaalooyin badan oo adduunka ah waxaa soo food saaray dabka masiibo (gaar ahaan dabkii weynaa ee Chicago ee 1871 ee waxaa ku dhintay kudhowaad 300 oo qof wuxuuna sababay in ka badan $ 200 milyan oo dhaawac ah) oo burburiyey dhismayaashoodii alwaaxda ahaa, burburiyey guryihii iyo goobihii shaqada.
Waxa kale oo jira walaac laga qabo xasilloonida. Haa, qoryuhu waa kufiican yahay aragtida kaarboonka, laakiin taariikhda inbadan, qoryuhu kuma uusan awood badnayn inuu taageero dhismooyinka in kabadan dhowr sheeko.
Gali qalab dhisme oo cusub oo loo yaqaan 'alwaax ballaaran'.
Alwaax tiro badan (oo loo soo gaabiyo loox weyn) waxaa lagu soo saaray waddanka dhirta badan leh ee Awstaria 1990-yadii Gerhard Schickhofer. Schickhofer wuxuu rabay inuu helo waddo uu ugu adeegsado kheyraadka faraha badan ee dalka la cusboonaysiin karo in lagu dhiso dhismayaal dhaadheer, sidaa darteed wuxuu soo saaray badeecad ka kooban alwaaxyo badan oo alwaax ah oo isku dhegan qaab isweydaarsi ah.
Qalabkan, oo loo yaqaan 'alwaaxda lakulmay (ama CLT), ayaa lagu gaarey dhammaan yoolalka Schickhofer. Waxay sidoo kale hormood ka ahayd Warshadaha Mass Timber oo hadda ka kooban CLT, Ciddiyaha Laamiga Dahaarka leh, Dowel laamiyada laydhka ah, iyo Glue Laaminated Timber (ama Glulam) oo ka mid ah agabyada kale ee soo baxaya.
Alwaaxdan alwaaxda iskutallaabta ah (CLT) waxay ka samaysan yihiin looxyo alwaax ah oo isku dhegan oo isku wada riixan qaab iskutallaab ah. Dhibcaha Sawirka: APA - Iskuduwaha alwaaxda injineernimada
Qalabkani waa raagaya, adkeysi, Iyo dab u adkaysta waxayna matalayaan mustaqbalka dhismaha deegaanka u fiican.
Faa'iidooyinka Kale ee Looxa Dadweynaha
CLT iyo noocyada kale ee alwaaxda waaweyn ayaa sidoo kale bixiya faa'iidooyin kale oo badan. Waxay ka dhigaan habka dhismaha mid aad u dhaqso badan oo fudud maadaama ay u oggolaanayaan looxyada iyo alwaaxda in loo dhiso cabbirro aad u gaar ah iyo dhererka goobta. Sida laga soo xigtay ka fikir Woodfurayaa faylka PDF , Dhismayaasha xaabada badan ayaa qiyaastii "25% ka dhakhso badan dhisiddooda marka loo eego mashruuc la mid ah oo la taaban karo" waxayna u baahan yihiin "90% taraafikada dhismaha ka yar."
Nidaamkan wax ku oolka ah ee dhismaha oo ay weheliso kharashyada alaabada ka hooseeya ayaa ka dhigaya qaab dhismeedka alwaaxda badan inay ku tartamaan, oo xitaa ka raqiisan birta caadiga ah iyo dhismaha shubka ah. A isbarbardhiga isbarbardhigafurayaa faylka PDF oo ay sameeyeen WoodWorks sanadkii 2015, waxay ogaadeen in "xafiisyada alwaaxyada ay ka hooseeyaan 20-30% halkii cag laba jibbaar xafiisyada aan qoryaha ahayn."
Daraasado fara badan ayaa muujiyey in alwaaxda la soo saaray ee dhismaha gudaha ay dejinayaan oo u wanaagsan caafimaadka maskaxdeena
Qalabka alwaaxda badan ayaa sidoo kale awood siiya naqshadayaasha iyo naqshadeeyayaasha si ay u abuuraan dhismayaal bilic soo jiidasho leh keena waxyaabo badan oo dabiici ah kana mid ah metropolises-ka aan dabiiciga ahayn. Muuqaalka iyo dareenka alwaaxda la soo saaray - iyo waxyaabo kale naqshadeynta bifophilic maamulayaasha alwaaxda wax ku dhisa waxay dhiirrigelisaa — waxay yareyneysaa buuqa waxayna hagaajineysaa wanaagga sida ugu dhow waxbarashofurayaa faylka PDF by Waxyaabaha keynta iyo dhirta Australia.
Digniinta ugu weyn ee halkan ka muuqata ayaa ah in alwaaxda looxyada waaweyn iyo dogobyada loo adeegsado dhismaha loo baahan yahay in si waara looga helo. Xaalufinta kaymaha iyo xaalufinta ayaa had iyo jeer khatar ah, oo haddii alwaaxa loo goosto CLT ay duleelaan oo ay kaymaha dumaan, faa'iidooyinka deegaanku kama badnaan doonaan cilladaha.
Nasiib wanaag, tani maahan arrin aad u badan, maadaama dhismayaasha iyo naqshadayaasha badankood adeegsada CLT iyo alaabada kale ee alwaaxda badan ay maskaxda ku hayaan sii jiritaan. Soosaarayaasha xaabada badan waxay sidoo kale ku tiirsanaan karaan ururada samafalka ah sida Golaha Maamulka ee Kaymaha (FSC) in si madaxbannaan loo xisaabiyo kaymaha loona caddeeyo in si masuuliyad leh loo maamulay.
Dad badan oo wax dhisa iyo nashqadeeyayaal ayaa sidoo kale alwaax ka isticmaalaya ilo maxalli ah.
In kasta oo horumar dhowaanahan la sameeyey, haddana weli waxaa jira caqabado dhowr ah oo hortaagan alwaaxda waaweyn inay noqdaan wax si ballaadhan loo aqbalay loona adeegsaday qalab dhisme.
Shuruucda dhismaha ee la aasaasay xilligii sibidhka iyo birta ayaa gaabis ah in la beddelo, sida dhismeyaasha iyo naqshadayaasha badan ee ku dhisayay shubka iyo birta shaqooyinkooda oo dhan.
Helitaanka maaddadu sidoo kale waa arrin maaddaama dhirta wax-soo-saarka baaxadda leh ee loo baahan yahay in laga dhigo alwaax tiro badan oo ah xulasho waxtar leh hadda uun baa la bilaabay in la dhiso.
Si kastaba ha noqotee, dhisayaasha, nashqadeeyayaasha, iyo ururada shahaadada dhismaha cagaaran ayaa bilaabay inay fiiro gaar ah u yeeshaan kuna daraan alwaax tiro iyo waxyaabo kale oo kaarboon hooseeya ah oo ku jira shahaadooyinkooda. Tusaalaha koowaad ee tan waa shahaadada LEED.
The LEED barnaamijka shahaadada waxay dhiirrigelisaa adeegsiga agabkan iyadoo ay ku jiraan "agabyada iyo ilaha" oo ah mid ka mid ah qeybaha ugu waaweyn ee amaahda. Wax ku dhiska alwaax tiro badan ayaa gacan ka geysan kara in lagu gaaro kartidan iyada oo loo marayo “mas'uul ka noqoshada alaabta ceeriin”Amaah.
Ka mid noqoshada LEED iyo barnaamijyada kale ee shahaadeynta ayaa waddo dheer u mari kara ku darista qalabkan guryaha iyo dhismayaasha xafiisyada yaryar.
Dhismaha dhaadheer ee dhaadheer, dhismooyinka alwaaxda dhaadheer iyo kuwa dhaadheer ayaa sii wada inay ka soo baxaan adduunka oo dhan. Dhismaha alwaaxda adduunka ugu dheer, waa 85.4-mitir Mjøstårnet oo uu qoray Voll Arkitekter oo ku taal Brumunddal, Norway, ayaa dhawaan la dhammaystiray, waxaana lagu wadaa inuu ka sarreeyo 25-dabaq Dhismo fuula ee Milwaukee, Wisconsin sanadka 2022.
Waxsoosaarka alwaaxda badani waxay si dhakhso leh caan uga yihiin adduunka oo dhan maaddaama kuwa wax dhisa iyo kuwa wax dhisaa ay ka shaqeeyaan naqshadaynta iyo dhisidda dhismayaasha bey'ada u habboon ee mustaqbalka.
Haddii aad xiiseyneyso inaad ku darto alwaax tiro badan ama waxyaabo kale oo dhismayaal ah oo kaarboon yar-yar ah oo lagu daro LEED la aqoonsan yahay ama mashruuc kale oo dhisme cagaaran ah (sida Guriga la dhaafo ama ENERGY STAR) kooxda waxqabadka sare!
Baro wax badan oo ku saabsan mustaqbalka waxqabadka sare iyo warshadaha dhismaha cagaaran xilliga soo socda dhacdo guddi dalwaddii!
Kheyraad badan oo alwaax ah